Horudhac: West Ham United vs Arsenal… (Gunners oo doonaysa inay wadada guusha dib ugu soo laabato kaddib sagaal kulan oo ay adkaan waayeen) – Gool FM
(London) 09 Dis 2019. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa doonaysa inay guul ka soo qaadato garoonka London Stadium, halkaasoo ay ku booqanayaan naadiga West Ham United, waxaana ay eegayaan inay soo gabagabeeyaan heerkoodii ugu xumaa muddo 42-sanadood ah.
The Gunners ayaa haatan guul la’aan ah sagaal kulan oo xiriir ah tartammada oo dhan, waxaana kulankii ugu dambeeyey ee Khamiistii gurigooda ku garaacday kooxda Brighton & Hove Albion, halka kooxda West Ham ay kaliya hal kulan guul gaartay 10-kii kulan ee ugu dambeeyey tartammada oo dhan.
Taariikhda: Isniin, 09 Dis 2019
West Ham United ayaa qiimeyn doonta xaaladda Michail Antonio, kaasoo ku soo bilowday kulankiisii ugu horreeyay tan iyo bishii Agoosto kulankii ay ka badiyeen Chelsea, laakiin seegay guuldarradii ay kala kulmeen bartamihii isbuuca naadiga Wolves.
Jack Wilshere iyo Winston Reid ayaa dib ugu soo laabtay tababarka ka hor kulankaan, laakiin waxaa laga yaabaa inaysan halis gelin, halka Manuel Lanzini iyo Lukasz Fabianski ay weli sii joogteynayaan maqnaanshahooda.
Arsenal ayaa qiimeyneysa Hector Bellerin taam ahaanshihiisa, kaddib markii uu ka soo kabsaday dhaawacii ku soo gaaray kulankii ay wajaheen Brighton.
Daafaca dhexe ee Rob Holding iyo laacibka khadka dhexe ee Dani Ceballos ayaa weli dhaawac kaga maqan Gunners.
>- West Ham ayaa guuleysatay kulankii xilli ciyaareedkii hore ay gurigooda kula ciyaareen Gunners, waxaana ay uga adkaadeen 1-0, taasoo soo gabagabeysay 10 kulan oo horyaalka ah oo aysan wax guul ah gurigooda kaga gaarin Arsenal (3 Barbaro iyo 7 Guuldarro). Si kastaba guul kama aysan gaarin kulamo xiriir ah oo ay garoonkooda kula ciyaartay kooxda Gunners tan iyo bishii October sanadkii 1984-kii.
>- Arsenal ayaa kaliya guuleysatay labo ka mid ah 12-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay marti ahayd (Away) kulammada London Derby horyaalka Premier League (4 Barbaro iyo 6 Guuldarro), labadaas guulna waxa ay ka gaartay 3-2 ay kaga adkaatay Crystal Palace bishii December sanadkii 2017-kii iyo 5-1 oo ay Fulham uga soo badiyeen bishii October sanadkii 2018-kii.
>- Ma jirto koox ka guuldarro badan horyaalka Premier League marka la ciyaarayo maalin Isniin ah kooxda West Ham oo la kulantay 29 guuldarro, halka Man United ay guuleysatay kulamo badan oo la ciyaaray Isniin tartankan kuwaasoo ah 43 kulan, waana in ka badan Arsenal oo guuleysatay 39 kulan.
>- West Ham ayaa khasaaro la kulantay labadeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay Premier league, markii ugu dambeysay oo saddex guuldarro oo xiriir ah ay kula kulmaan gurigooda waxa ay ahayd intii u dhaxaysay May iyo Agoosto sanadkii 2015-kii, halka sidoo kale saddex guuldarro oo isku xigta ay garoonkooda kula kulmeen hal xilli ciyaareed gudihiis bishii October sanadkii 2013-kii.
>- Arsenal ayaa kaliya hal jeer guuleysatay 11-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay Premier League ku soo ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda bisha December, (1 Guul, 6 barbaro iyo 4 Guul) waxaana kulankaas ay garaaceen Crystal Palace bishii December sanadkii 2017-kii, waxay guul la’aan yihiin lix kulan tan iyo markaas (4 Barbaro iyo 2 guuldarro).
>- West Ham ayaa uruursatay dhibco yar siddeedeedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League, waxaana ay heleen afar dhibcood (1 Guul, 1 Barbaro iyo 6 Guuldarro) waana in ka badan koox kale oo kale horyaalka Premier League.
>- Weeraryahanka kooxda Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa gacan ka geystay 10 gool 10-kiisii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League ee kulammada London Derby, waxa uu dhaliyey 8 gool, halka uu caawiyey 2 gool oo kale, si kastaba, weli gool kama uusan dhalin saddex kulan oo uu wajahay West Ham, ma jirto koox uu ka horyimid kulamo ka badan oo uusan gool ka dhalin tartankan.
>- Xiddiga kooxda West Ham United ee Felipe Anderson ayaa dhalin ama caawin hal gool siddeediisii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League, 553 daqiiqo ayuuna garoonka ku jiray siddeedaas kulan, waana heerkiisii ugu dheeraa kooxda oo uusan wax gool ah ku lug lahayn tartankan.